Thwebula SpeedX 3D 1.96 isizulu – Vessoft
Thwebula SpeedX 3D
SpeedX 3D – umdlalo othandwayo ukushayela ngesivinini ku-3D ithrekhi. Umdlali idinga ukuba ngikhuthazele eside ngangokunokwenzeka on the track oshintshashintsha ukuze athole isibalo esikhulu amaphuzu. In SpeedX 3D kukhona ukufinyelela ezehlukene umdlalo izindlela namazinga eziningi nobunzima okwandayo kanye nokukhula izithiyo ezengeziwe ngesikhathi edlulayo yabo. In SpeedX 3D kukhona okukhulu 3D ihluzo futhi ezimnandi ezizodlalwa esekela ngokuphelele umkhathi yangaphakathi. Futhi SpeedX 3D kwenza ukuncintisana namanye abadlali ngokusebenzisa Internet.
Emihle 3D ihluzo
Amazinga Abaningi nobunzima ezahlukene
Ukusetshenziswa ezihlukahlukene amabhonasi
Ukuvumelanisa Online kwamarekhodi
Ukuncintisana nabanye abadlali
Amazwana on SpeedX 3D:
SpeedX 3D Ahlobene software:
English, Français, Deutsch, Русский... Hearthstone 3.0.9791